EPRP အဓိကဖော်ပြသောအရာများ Archives - Page3of3- EPRP ၀က်ဆိုဒ်တည်ဆောက် ပြုပြင်ဖန်တီးမ
You are at:Home»Category: "EPRP အဓိကဖော်ပြသောအရာများ" (Page 3)	Browsing: EPRP အဓိကဖော်ပြသောအရာများ
3	EPRP အဓိကဖော်ပြသောအရာများ
ဇူလိုငျ 6, 2016EPRP	နိုင်ငံရေးပါတီများသည် ယနေ့ခေတ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစနစ်များ၏ အခရာပင်ဖြစ်သည်။လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံအများစုတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများသည် နိုင်ငံရေးသဘောသဘာဝ၏သိသာထင်ရှား ဆုံးသော လက္ခဏာရပ် ဖြစ်သည်။ Other chapters of “ Introduction to Politics” .
ဇူလိုငျ 4, 2016EPRP	ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းများရှိ အာဏာဗဟိုအချက်အခြာဖြစ်သောအစိုးရများအပါအ၀င် မည်သည့် လူ့အဖွဲ့ အစည်းများတွင်မဆို အာဏာကိုင်စွဲထားသူများသည် တောင်းဆိုမှုအား အဓိကထားရလေ့ရှိ သည်။အဆိုပါ တောင်းဆိုမှုများသည် များစွာသောရင်းမြစ်များမှပေါ်လာနိူင်သလို ပုံသဏ္ဍန်မှာလည်း အမျိုးမျိုး ဖြစ်သည်။ Other chapters of “ Introduction to Politics” .
မတျ 31, 2016EPRP	အတွေးအမြင် Alan Smith နှင့် Gregory Cathcart (EPRP)တို့ရေးသားသော စာတမ်းဖြစ်သည်။ တက်ရောက်လာသော အန်အယ်ဒီအစိုးရ၏ ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်ရာထူးများ ရွေးချယ်တင်သွင်း မှုသည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြဌာန်းချက်အတိုင်းသာဖြစ်သည်။ အန်အယ်ဒီအနေဖြင့် ထိုကျင့်ထုံးကိုကျင့်သုံးလိုက်သောကြောင့် ပုံမှန်ဒီမိုကရက်တစ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာကျင့်သုံးမှုနှင့် ညီညွှတ်မှုရှိသော အစစ်အမှန်ကျင့်သုံးမှုပေါ်ပေါက်လာစေရေးအတွက် ယခုအခြေခံဥပဒေဆိုင် ရာပြဌာန်းချက်ကို ပြန်လည်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရန်အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည်။
ဇနျနဝါရီ 20, 2016EPRP	မကြာသေးမီက ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ EPRP ၏ထင်မြင်ချက်
စကျတငျဘာ 21, 2015	EPRP နားထောင်ကြားနာရေးစီမံချက်သည်နားထောင်ကြားနာရေးအနုပညာနှင့်စွမ်းပကားကို အသုံးချရန်ကြိုးပမ်းခြင်းဖြစ်ပြီးကာလအတန်ကြာ နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့ရသောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု များ ၎င်းတို့၏ဘ၀များ၊အတွေ့အကြုံများပြောဆိုလာစေရန်နှင့် ဝေမျှပေးရန်တွန်းအားပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ထိုသို့ပြောဆိုမျှဝေပေးခြင်းသည် ၎င်းတို့အားပိုမိုအားရှိလာစေပြီးထိုအချက်အလက် များအား ဝေမျှပေးခြင်းဖြင့် လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကိုလည်း ပိုမိုအားကောင်းလာစေပါသည်။ EPRP ၏အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်သော နားထောင်ကြားနာရေးအစီအစဉ်ကို အကောင်အ ထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယခုထုတ်ဝေမှုအား ပါဝါနှင့်နားထောင်ကြားနာရေးအနုပညာနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံများ၏ သင်တန်းအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ဖန်တီးထားပါသည်။ ယခုထုတ်ဝေမှုသည် Ethnic Peace Resources Project (EPRP) ကျားမဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာအကြံ ပေးပုဂ္ဂိုလ် ဒေါက်တာ ခင်မာမာကြည်၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းဖြစ်ပြီး EPRP ၀န်ထမ်းများကထုတ်လုပ် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။သရုပ်ဖော်ရေးဆွဲသူမှာ အာကာ ဖြစ်သည်။
ဇှနျ 7, 2015EPRP	ဒီမိုကရေစီနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများအကြောင်း နိုင်ငံရေးမိတ်ဆက်နိဒါန်း နောက်ဆုံးတင်လွှင့် သည့် မှတ်စုနှစ်ခု ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးမိတ်ဆက်နိဒါန်းသည် ဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်EPRP တို့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ သော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်လာသူများ၏ တောင်းဆိုချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးသောအား ဖြင့် ဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာအလန်စမစ် ပြင်ဆင်ပြုစုခဲ့သော စာတမ်းတွဲများဖြစ်သည်။နိုင်ငံရေးအကြောင်း နားလည်စေရန်နှင့် တွေးခေါ်နိုင်စေရန်အတွက် ပြုစု ထားသည်။စာတမ်းတခုချင်းစီသည် အတိုချုပ်ဖော်ပြချက်များဖြစ်ပြီး နားလည်လွယ်စေမည့်နည်းလမ်း ဖြင့် အသုံးဝင်သော အချက်အလက်များဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
မတျ 12, 2015EPRP	ယခုစာတမ်းကို ၂၀၁၅ ဖေဖေါ်ဝါရီတွင်ရေးသားခဲ့ပြီးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆက်ဆံရေးရုံးများ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှင်းပြထားသည်။EPRP နှင့် မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးအထောက် အကူပြုအဖွဲ့ (MPSI )တို့၏ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။
ဒေသခံဌာနေ မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်များ ။ ။ လေ့လာဆန်းစစ်ချက် လေးရပ်
ဖေ‌ဖျောဝါရီ 27, 2015	EPRP အတွက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ပြုစုထားသော ဤစာတမ်းလေ့လာချက်တွင် ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ ဖောင်ဒေးရှင်းများနှင့် ဒေသခံဌာနေ မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်များ ရရှိသက်ဝင်စေရန် ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပါဝင်ပါသည်။ကနေဒါ၊သြစတေးလျှ၊မလေးရှားနျင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံတို့အား လေ့လာဆန်းစစ်ထားပြီး ဆက်လက်ဖတ်ရှုသင့်သော ရှင်းလင်းချင် သဘောအမြင်များ စာရင်းတခုလည်း ပါရှိပါသည်။
လူ့သိုက်မြုံများ၏ အသံကြားနားခြင်း။ ။ကရင်ပြည်နယ်
ဒီဇငျဘာ 5, 2014Center for Peace and Conflict Studies (CPCS)	ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်လက်ရှိ လိုအပ်ချက်များ အပေါ် အမြင်အမျိုးမျိုးတို့ကို သိရှိရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ကရင်ပြည်နယ်တွင်းရှိ လူတန်းစားပေါင်းစုံ ၁၀၀ ကျော်နှင့် စကားလက်ဆုံဆွေးနွေးချက်များ ဖြစ်သည် အခြေခံ သုတေသန နည်းပညာအဖြစ် ကြားနာနားထောင်ခြင်း ပညာရပ်ကို အသုံးပြုပြီးပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ၏ စိတ်ထဲတွင်ထပ်တလဲလဲ ဖြစ်ပေါ်နေသော အကြောင်းအရာများနှင့် ဘုံတုညီချက်များကို ဆွဲယူ အကဲဖြတ်ထားသည်။ ယခု ထုတ်ဝေခြင်း သည် မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသော ပဋိပက္ခကြောင့် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုခံစားနေရသောသူများ၏အမြင်နှင့် အကြံဥဏ်များ ၊ရင်ဖွင့်သံများကို ဖော်ပြထားသည်။ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပဋိပက္ခ လေ့လာရေးဗဟိုဌာန (CPCS )မှ ၂၀၁၄ နိုဝင်ဘာတွင် ထုတ်ဝေသည်။
3 About	In April 2013 The Ethnic Peace Resources Project (EPRP) emerged out of the work of the Myanmar Peace Support Initiative (MPSI),aNorwegian led international initiative to support the peace process in Myanmar. MPSI was established to work with the government, EAOs political groups, civil society actors, communities, and international partners to provide support to the ceasefire process.